Household Ikubumbe, Kitchenware Ikubumbe, Crate Ikubumbe - HEYA
Ekhaya Abanye Umngundo
Spoon / ifolokhwe / imela Umngundo
Thin Wall Umngundo
I-Kitchenware Ezinye iiMolds
Icandelo lezolimo kunye nezoLimo
Iimbiza zeentyatyambo Umngundo
U-Heya Mold uyanyanzelisa ekuveliseni umgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu wokubumba weplastikhi, ekulula ukuwusebenzisa nokugcina abathengi.
Heya Ikubumbe uyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi ngofezekiso olusebenzayo ubuntu elicwangcisiweyo kunye-stop izisombululo sokubumbela.
I-Heya Mold iya kuphuhlisa kwaye iyile iimveliso kunye nezinto zokubumba ngokwezicelo zabathengi ukubanceda ukuba bonge iindleko zeeprojekthi ezintsha, benze ishishini labo linenzuzo kwaye libe nesivuno esikhulu.
Heya Ikubumbe isebenzisa iintlobo ngezixhobo processing phambili, zidityaniswe kunye namava osisityebi ekwenzeni ngumngundo zeplastiki, ukuhlola ngumngundo efanelekileyo ngakumbi kwaye izinzile kubaxumi.
Usihlalo ongenasiphelo weSihlalo
Sihlalo woLwandle uMngundo
USihlalo Inaliti zomngundo
USihlalo Inaliti Inaliti zomngundo
Ukuhlawulwa kweSihlalo sePlastiki
I-HEYA MOLD ikhethekileyo kwimveliso yokubumba yeplastiki ngaphezulu kweminyaka eli-10, njengokubumba kwendlu, izinto zokubumba zasekhitshini, izinto zokubumba zasekhaya, ishishini kunye nezolimo. Njalo njalo. ulwenziwo kunye nenkqubela exesheni ”njengexabiso engundoqo, enika abaxhasi ngumngundo ezikumgangatho ophezulu weplastiki kunye izisombululo nye-mngundo.
Yintoni iSiseko seMold?
Yintoni isiseko sokubumba? Iseti epheleleyo yokubumba kwimveliso yeemveliso ezithile zomgubo ngokucinezela okanye ngokucinezela kwakhona. Ukongeza, inkxaso yokubumba ikwabizwa ngokuba sisiseko sokubumba. Umzekelo, umatshini die-eyahlulayo idibanisa kwaye ilungisa iindawo ezahlukeneyo zokubumba ngokwe-r ethile ...
Zeziphi iindidi ezisibhozo zomngundo wenaliti?
(1) Inxalenye-yomngundo yenaliti enye Xa kuvulwa ukungunda, ukungunda okuhambisekayo kunye nokubumba okungaguqukiyo kuyahlulwa, ukuze indawo yeplastiki ikhutshwe, ebizwa ngokuba ngumngxunya omnye wokungunda komhlaba kwaye ikwabizwa ngokuba ngumngundo ophindwe kabini . Yeyona ndlela ilula kunye nesisiseko sokubumba ngenaliti. Yinto c ...
Plastic Inaliti Ukubumbela Shrinkage
Plastic ziphene yokubumba shrinkage yenye iipropati xa ubushushu eziphathekayo ithontsiza. Ireyithi yenaliti yokubumba shrankage iyafuneka ukumisela imilinganiselo yokusebenza. Ixabiso libonisa inani lesivumelwano esiboniswa ngumsebenzi emva kokuba ususiwe ...
Amagama omnxeba we Judy